High-Quality Factory nanao Bouillon Cube mampahatsiro sakafo ny Fandrosoana wrapping Box fonosana Machine Amin'ny Video orinasa sy ny mpanamboatra | Brightwin
ady totohondry milina
fametahaka marika milina
Carton fonosana milina
Factory fampahafantarana Bouillon Cube mampahatsiro sakafo ny Fandrosoana wrapping Box fonosana Machine Amin'ny Video
Goba pamokarana Bouillon no ampiasaina amin'ny asa fanaovan-gazety sy ny mpamatsy Bouillon cubes, takela-bato, siramamy cubes, tsaramaso maitso mofomamy sy matanjaka hafa vokatra.
Isika no iray monja ao Shina izay afaka manao tsipika iray manontolo ho an'ny cubes, izay ahitana ny maika milina, wrapping milina , ady totohondry sy ny conveyor milina. Maro ireo orinasa te mandika ny conveyor, fa tsy nahomby izy ireo, satria tsy afaka handika ny fototry ny teknolojia; ny cubes ho voasakana Raha tsy misy izany fototra teknolojia.
Izay manana raharaham-barotra misy kilema orinasa bola ampy, miavaka rehefa avy-varotra Ilaintsika sy maoderina fotodrafitrasa mamokatra, isika izao no nahazo ny faran'izay eo anivon ny mpividy manerana izao tontolo izao ho an'ny Bouillon Cube fonosana Machine ,Bouillon Cube Press Ary Wrap Machine Amin'ny Box fonosana Machine ,mampahatsiro sakafo ny Fandrosoana Cube Bouillon wrapping Ady Totohondry Machine , Wide fifantenana sy ny fifadian-kanina fanaterana ho anao! Ny filozofia: Tsara toetra, mafy ny fanompoana, fanatsarana foana. Manantena izahay fa mihamaro oversea namana hanatevin-daharana ao amin'ny fianakaviana ho an'ny fampandrosoana bebe kokoa akaikin'ny ho avy!
Bouillon goba pamokarana. Mety hamita mifanety, fanehoany sy cartoning mandeha ho azy. Tsy azo ampiharina ny vokatra isan-karazany ao tahaka ny Bouillon cubes goba, sôkôla, siramamy cubes sy tsaramaso Mametaka mofomamy sns
1. izany dia natao sy vokarina araka ny mpanjifa 'vokatra isan-karazany, horonan-tsary sy ny fahaizana sns
2. Araka ny fahafahana manapa-kevitra ny wrapping be ny milina sy ny ady totohondry milina.
3. Afaka ny ho hafa fonosana boaty fanovana lalana faritra sasany.
4. Ny malefaka no namboarina.
Be ny Punch & maty (Set) 17/19/25
Max. Tsindry (kn) 100
Max halavan'ny (mm) 40
Max. Halalin'ny famenoana (MG) 25
Goba habeny (MG) namboarina
Ahodina Speed ​​(R / min) 20
Ny fahafaha-mamokatra (PC / m) 600-1000
Hery herinaratra loharano (V / Hz) 380/50
Outside refy (MG) 600 * 960 * 1750
Weight (kilao) 2300
Taorian'ny asa varotra
1. Atolotra matihanina boky fandidiana
2. Online fanohanana
3. fanohanana ara-teknika Video
4. Free piesy nandritra ny fe-potoana fiantohana
5. Field fametrahana, naniraka sy mampiofana
6. Field fikojakojana sy ny fanamboarana ny fanompoana
Previous: Factory Supply Bouillon Cube mampahatsiro sakafo ny Fandrosoana wrapping Box fonosana Machine Amin'ny Video
Next: OEM / ODM Factory Chicken Bouillon Cube fonosana Machine Amin'ny Hffs wrapping Machine
Bouillon Cube fonosana Machine
Bouillon Cube Press Ary Wrap Machine Amin'ny Box fonosana Machine
mampahatsiro sakafo ny Fandrosoana Cube Bouillon wrapping Ady Totohondry Machine
Ambongadiny OEM mampahatsiro sakafo Bouillon Cube ny Fandrosoana ...
Rapid Delivery for Pumpkin Taranaka mivarotra paty Vegetabl ...
Automatic lube filler menaka ho an'ny tavoahangy plastika
Hand Sanitizer capping milina mameno for PLA ...
Rm 1003, No. 1399, Jinqiao Rd, Shanghai Shina
Call isika izao (WhatsApp):
Bouillon Cube Machine , Bouillon Cube fanaovana Machine , Bouillon Cube Wrap Machine,沪ICP备18018895号-1